Qaybaha buugga: ogow wax kasta oo buuggu ku dhex leeyahay gudaha iyo dibaddaba | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 23/07/2021 09:56 | La cusbooneysiiyay 23/07/2021 09:59 | dhowr
Haddii aad go'aansatay inaad daabacdo oo aad daabacdo buug, hambalyo! Rumayso ama ha rumaysan, qorista buuggu waa dariiqo lagu sii daayo mala-awaalkaaga, iyadoo aan loo eegin inaad akhrido iyo inkale, inaad guuleysato iyo in kale, durba waa inaad dareentaa inaad kuqanacsan tahay inaad sameysay. Laakiin, marka la daabacayo waxaa muhiim ah inaad ogaato waxa buuggu ka kooban yahay, kuwa dibedda iyo kuwa gudahaba.
Waana halka aan dooneyno inaan kaa caawinno. Marka xigta waxaan ka hadli doonnaa waxa ay yihiin Qaybaha buugga, kuwa ugu caansan uguna yar. Xiisaynaya? U tag.
1 Buugga iyo qaybihiisa
2 Noocyada qaybaha buugga
2.1 Qeybta dibedda ee buugga
2.1.1 Jaakada siigada
2.1.3 Daboolka dambe
2.1.4 Wad biilasha
2.2 Buugga qayb ka mid ah
2.2.1 Go'aano xushmad leh
2.2.2 Cinwaanka Bastard
2.2.3 Daboolka gudaha
2.2.4 Dhibcaha ama bogga xuquuqda
2.2.6 Hordhac, arar, hordhac
2.2.7 Jirka buugga
2.2.11 Erayada ereyada
Buugga iyo qaybihiisa
Qof kasta, buuggu wuxuu ka kooban yahay jaldi halka ay hore iyo gadaasha dambe yihiin iyo gudaha, halka ay sheekadu ku taal. Laakiin wax badan oo kale ma yaqaan. Si kastaba ha noqotee, hantidan dhaqameed ee leh aqoonsi aad u yar maanta (iyo isticmaal) runti wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo buugga ka mid ah, oo mid kasta oo ka mid ahi leeyahay hawl cayiman, oo akhristaha ka caawinaysa inuu waayo-aragnimo fiican yeesho, dareemo ...
Iyaga oo dhan in la ogaado ma aha wax adag. Adiguna uma baahnid inaad tifaftire ama naqshadeeye ahaato si aad iyaga u xiiseyso. Waa hab lagu qiimeeyo wax kasta oo ka mid ah shaygan. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay leedahay?
Noocyada qaybaha buugga
Waxaan ku bilaabaynaa inaan kuu sheegno in buug loo qaybin karo laba qaybood: midka dibedda iyo kan gudaha.
Qaybta dibedda waa tan ay ku jiraan xagga hore, lafdhabarta iyo dhabarka dambe, laakiin dhab ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo aan la aqoon. Dhinaceeda, qaybta gudaha ayaa ah mida koobaysa bogagga sheekada lagu sheegay. Haddana waxaa jira amar iyo qaybo muhiim u ah.
Qeybta dibedda ee buugga
La Qeybta kore ee buugga ayaa maanta loo fududeeyay "dabool" fudud. Laakiin dhab ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo qayb ka ah. Kuwani waa:
Waxay ku saabsan tahay jeldigaas oo daboolaya buugga gebi ahaanba ilaalinta dabool kale. Si kale haddii loo dhigo, waa arrin ay buugaagta qaarkood keenaan (inta badan daboolka adag) si loo sii ilaaliyo buugga.
Tani waxay la mid noqon kartaa daboolka uu ilaaliyo, ama way ka duwanaan kartaa midba kan kale.
La dabool waxaan dhihi karnaa hadda waxaa lagu fahmay dabool. Waa dhammaan qaybta dibedda ee ilaalisa gudaha, taas oo ah, waa labada daboolka hore, lafdhabarta iyo daboolka dambe.
Jaldiga waxaad ka heli doontaa cinwaanka buuggaas, qoraaga, daabacaha, iyo sidoo kale dulucda shaqada (xagga dambe) iyo lambarka diiwaangelinta shaqada ee ISBN.
Sidaad arki karto, daboolka dambe waa gadaasha daboolka. Si kale haddii loo dhigo, waa qayb ka mid ah halka ay ku hartay soo koobitaan soo jiidasho leh oo ku saabsan waxa uu akhristaha ka helayo buugga dhexdiisa.
Xaqiiqdii hadda waxaad ka fekereysaa gabalkaas dharka ah oo aad u maleynaysid wax la mid ah buugga. Runtuna waxay tahay inaadan khaldanayn, laakiin aanad gebi ahaanba ahayn. Guntigu waa kaas warqad xariijin ah oo had iyo jeer isku duubta daboolka ama jaakadda siigada iyo in sida caadiga ah loo isticmaalo in lagu muujiyo wax ku saabsan buugga, tusaale ahaan lambarka daabacaadda, nuqulada la iibiyey, in uu yahay asalka asalka taxanaha, iwm.
Dhab ahaan, maahan wax muhiim ah, laakiin waxay u adeegtaa oo keliya qurxin waxayna u sii yaraanayaan araggooda.
Lafdhabarka, oo ay weheliyaan daboolka iyo daboolka dambe, waa maxay qayb ka mid ah dhammaan qaybta dibedda. Waa meesha ay ku hayaan dhammaan xaashiyaha gudaha ee buuggu haysto, cabirkiisuna wuxuu ku xirnaan doonaa inta bog ee uu leeyahay.
Sida qaybaha kale ee buugga, halkan Waxaa ka mid ah cinwaanka, magaca qoraaga, daabacaha iyo, haddii ay qayb ka tahay ururinta, magaceeda ama shaambaddeeda.
Ugu dambayn, qaybaha buugga gudihiisa, waxaan ku leenahay sacab. Waa laab gudaha ah oo inta badan qayb ka ah jaakada siigada ah si aad ugu duubto oo aad ugu hagaajiso buugga, oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan qoraaga, daabacaha ama buugaag kale oo qayb ka ah qoraha ama ururinta iyo daabacaha.
Buugga qayb ka mid ah
Hadda oo aan haysanno qaybta dibedda ee loo qaybiyay qaybaheeda kala duwan, waxaa la joogaa waqtigii la ogaan lahaa qaybta gudaha. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan guda gelin mawduucaas, waxaan dooneynaa inaan kaala hadalno Ilaalada.
Kuwaas oo badan lagu tilmaamay inay yihiin xubno ka mid ah qaybta dibedda, laakiin iyagu gudaha ayay ku jiraan. Kuwani waa bogag ku dhegan daboolka gudaha qaab diptch ah, oo ku biiraya daboolka iyo xaashida koowaad ee gudaha buugga (xiidmaha).
Kaliya waxaa loo isticmaalaa buugaagta adag, shaqadooduna waa inay siiyaan joogteyn dheeri ah gudaha si uusan u lumin bogaggiisa. Gaar ahaan maadaama buugaag badan oo ka mid ah lafdhabarta aysan u dhaqmin sidii isku xirka bogagga gudaha, laakiin taa beddelkeeda koofiyadaha ugu dambeeya ayaa shaqeynaya.
Taasi waxay tiri, hadda waxaan ka hadli doonnaa qaybaha buugga gudihiisa, kuwaas oo ah:
Go'aano xushmad leh
Waxay yihiin a labo caleemo oo haray, bilowga iyo dhamaadka labadaba, oo u adeega "gogol dhig" iyo ilaalin si wax kasta oo kale aysan u xumaanin. Qaarkood waxay illoobaan inay ka tagaan laakiin, runtii, iyagu waa lagama maarmaan.
Sidoo kale loo yaqaan bogga cinwaanka, kani waa bog keliya oo cinwaanka buuggu ku qoran yahay, wax intaas dhaafsiisan. Looma isticmaalo badan, dhab ahaantii, in yar baa og, laakiin waa bogga ugu habboon ee ay qorayaashu ku saxiixaan buugaag (runtiina taasi waa shaqadeeda).
Halkan mar labaad ayaa cinwaanka buuggu ku soo noqnoqonayaa qoraaga iyo, mararka qaarkood, sumadda iyo daabacaha daabacaya. Tani waa tan ugu wanaagsan ee la yaqaan oo wali la adeegsado.
Dhibcaha ama bogga xuquuqda
Waxay ka tarjumaysaa a macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan heer farsamo sida lambarka daabacaadda, sanadka la daabacay, qoraa, tarjumaad, dhigaal sharci, madbacadda, xogta muuqaalka la isticmaalay, qoraaga daboolka ...
Badanaa waa dhowr sadar, halkaas oo buuga loogu talagalay hal qof ama dhowr.
Hordhac, arar, hordhac
Waa kuwa qoraallo si guud uga hadlaya dulucda sheekada. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaa loo isticmaalaa in lagu bilaabo qorshaha buugga, wax khaldan laakiin taas ayaa marba marka ka dambaysa la arkaa.
Xaqiiqdii, odhaahda, hordhaca iyo hordhaca labaduba waxay hordhac u yihiin qoraaga si uu u sharaxo sababaha ku kalifay inuu qoro buugaas, ama inuu qof kale ka hadlo qoraaga
Tani waxay ahaan laheyd qeybta dhexe ee shaqada, halkaas oo sheekadu ka dhaceyso. Badanaa u qaybi cutubyo ama qaybo si aad uga caawiso akhristaha in uu sheekada u dhammeeyo si tartiib tartiib ah (oo hakin).
Waa ikhtiyaari, qorayaasha qaar ayaa dhigay ama ma siinayaan taabashada ugu dambeysa shaqada.
Waa bog meesha qoraagu wuxuu la hadlayaa akhristaha iyo halka uu kaga faaloodo shaqadiisa ugana mahadceliyo dadka suurta galiyay inuu soo baxo.
Dhexdeeda, cutubyada ama qaybaha gudaha ayaa lagu soo ururiyaa, iyo sidoo kale bogga ay ka bilaabayaan, si akhristaha uu u arko buugga guud ahaan una aado bogga gaarka ah ee isaga xiiseynaya.
Waa a cadeynta shuruudaha qaarkood in la isticmaalo. In kasta oo qorayaal badani adeegsadaan qoraallada hoose, mararka qaarkood faallooyinka ayaa aad u dheer oo waxay u baahan yihiin qayb gaar ah oo ka mid ah buugga.
Liiska shaqooyinka, bogagga shabakadda, iwm. la tashaday.
Hadda runtii waad ogaan kartaa dhammaan qaybaha buugga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Qaybaha buugga